Burmese People: ခေတ်သစ် ငဘ များ
ခေတ်သစ် ငဘ များ
ကျနော့အဖေပြော ခဲ့တဲ့ ငဘ ၀တ္တုထဲ့ က ဟာ သ လေး သွား သတိရ မိတယ် ……
ကွန်ုမြူနစ် တွေ ငဘ တို့ရွာ ထဲ ၀င် ပြီး ရွာသား တွေ ကို စစ်တော့အလံ နီက၀င် လာ ရင် အလံဖြူကို မထောက် ပံ ဖို့့….အလံ ဖြူ က၀င် လာ ရင် အလံ နီကို မထောက် ပံ ဖို. .. အမိန့် တွေ ထုတ် တယ် ….ရွာသား တွေ က ဘယ် သူ့ကြောက် ရ မှန်း မသိတော့ ဘူး…. ဘယ် သူ့အဖေခေါ် ရ မှန်း မသိတော့ဘူး…….
ဒီလို နဲ့ တနေ့ရွာထဲ ကို အဖွဲ့ တဖွဲ့ဝင် လာ ပြီး ရွာသား တွေ ကို စစ်တယ်….အဖြူ ကို ထောက် ခံ လား ..အနီကို ထောက် ခံ လား ပေါ့….ငဘ အလှည့်ရောက် တော့.. ခေါင်း ဆောင် လုပ် သူ က ငဘကို မေး တယ်… “မင်း က အဖြူလား.. အနီလား …” ဆိုတော့ငဘ.. အူတူတူအတတခုမေး နေတာ က ဘယ် အဖွဲ့မှန်း လဲ မသိတော့ “ကျနော် က အပြာ ပါ” တဲ့ …..မေး တဲ့ ခေါင်း ဆောင် စိတ် ညစ် သွား တယ်..ကွန် မြူနစ် မှာ အလံ ဖြူ ရယ် အလံ နီရယ် နှစ် ဖွဲ့ပဲ ရှိ ပါ တယ် … ငဘ ပြော လိုက် တဲ့ အလံ ပြာ ဆို တာ နောက် တဖွဲ့များ ပေါ် လာ သလား ရယ် ပေါ့ ..နောက် ဆုံး စဉ်းစား မ ရ တာ နဲ့ ပဲ.. ငဘ ကို ပြန် မေး လိုက် တယ် …“ဟေ့.. ကောင် မင်း ပြော တဲ့ အပြာ ဆို တာက ဘယ် အဖွဲ့လဲ” လို့ မေး လိုက် တယ်…
ငဘ က လဲ ကြောက် ကြောက် လန့် လန့် နဲ့ “မဟုတ် ပါ ဘူး..ဗိုလ် ကြီး .. ကျနော် က ဘယ် သူ လာ လာ ပြာ နေအောင် ကြောက် နေ ရ တဲ့ သူ မို့အပြာ ပါ လို့ပြော တာ” ဆို လို က် တော့မှာကွန်မြူနစ် ဗိုလ်ကြီး ရော .. ရွာ သား တွေ ပါ သဘော ပေါက် တော့တယ်……
ခု ကျနော် တို့ဖြစ်နေ ပုံလဲ … အပြာ ဖြစ်နေ ပြီ……ဆိုက် ကားနင်း တဲ့ သူ က .စည် ပင် ကြောက်ရ မှာ လား…မော်တော် ပီ ကယ် ကြောက် ရ မှာလား…. ရပ် ကွက် နေတဲ့ သူက………ဥက္ကဌ ကြောက် ရ မှာ လား..ကြံ ဖွတ်ကြောက် ရ မှာ လား…ရဲ ကြောက် ရမှာ လား …နောက် ဆုံး တော့ဘယ် သူ လာလာပြာနေအောင် ကြောက် နေ ရ ပြီ……ဟီး..ဟီး…. တွေး ကြည့်ရ င် ရယ် စရာ တော့ကောင်းသား ဗျ….ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ ဆိုတော့ကျနော် တို့ ပြာ နေအာင် ကြောက် နေ ရ တဲ့ သူ တွေ က လဲ …သူ တို့အထက် ကအ ကြီးအကဲ တွေ ကို ပြန် ပြီး .. ပြာ နေ အောင် ကြောက် နေ ရ လို့ပါ ပဲ…..
တခုတော့ရှိတယ်…..ကျနော် တို့ က သူ တို့ကို ကြောက် စရာ လို သဘော မထား ရင် ..သူ တို့ကလဲ အထက် က လူ ကြီး တွေ ကို…………………
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 07:51
Labels: ဒီလို ဒီလို
ကဒ်ဖုန်းများချပေးတော့မည်...။
ဒီလိုလူတွေ ရှိခဲ့လို့ 
ပြည်ထောင်စုနေ့ ..(ဂျစ်တူးဘလော့မှကူးယူဖော်ပြသည်)
မြင် တတ်ကြ ပါ....
ပြည်သူတွေ အား လုံး ပဲ ..နအဖ ..ကြိုး ဆွဲ ရာမပါ ကြ...
နေဘုန်း လတ် သို့...............
မိုးရွာသော နေ့ 